Ixesha kunye nabahlobo 33
Ngaba i-Associate Societies ineempembelelo zokukhawuleza okanye ukuqhubela phambili ingqondo kwimvelo yayo?
Ubulungu kuluntu oluyimfihlo luya kuyithintela ingqondo yalo okanye lincedise ekuphuhlisweni kwayo ngokobunjani bophuhliso kunye nolo hlobo lwengqondo kunye nohlobo lweMfihlo yoMbutho elililungu layo. Yonke imibutho yoluntu efihlakeleyo inokubekwa phantsi kweentloko ezimbini: ezizezazo kukuqeqesha ingqondo nomzimba ngeengqondo nangeenjongo zokomoya, kwaye abo banoncedo lwasemzimbeni nangokwenyama. Abantu ngamanye amaxesha bazenza ngokwento enoku kuthiwa yikudidi lwesithathu, olwenziwa yimibutho efundisa ukukhula kwengqondo kunye nebango lonxibelelwano nezinto zokomoya. Kuyatshiwo ukuba izinto ezingaqhelekanga ziveliswa kwizangqa zazo nakwiindawo zazo zokuhlala. Bakwabango kwaye banakho ukunika abo banokubona kufanelekile, izibonelelo zomzimba ngaphezu kwabanye. Zonke ezi zinto kufuneka zingene phantsi kodidi lwesibini, kuba into yazo iya kufunyanwa inomzimba kunye nomzimba.
Imibutho eyimfihlo yeklasi yokuqala bambalwa xa ithelekiswa nodidi lwesibini; kwaba bambalwa kuphela ipesenti elincinci ngokwenene elinceda ingqondo ekukhuleni ngokomoya. Phantsi kwesi sigaba sokuqala kubandakanywa imibutho yezenkolo ethi izame ukunceda amalungu ayo ekuvukeni ngokomoya nasekuthini kungenzeki-angenazo izinto ezifana noqeqesho kwezopolitiko okanye ukuya emkhosini okanye ukuyalela ngeendlela zeshishini-kunye nemibutho yentanda-bulumko neyenkolo. Abo bakweenkolo ezithile zonqulo banokufumana izibonelelo zokuba lilungu lebutho elifihlakeleyo ngaphakathi kolo kholo ukuba izinto zoluntu azivumeli ukuba ingqondo igcinwe ebumnyameni kwaye ingayithinteli ekufumaneni ulwazi. Phambi kokuba naluphi na ukholo lujoyine uluntu oluyimfihlo yokholo lwayo, kufuneka ibuze kakuhle kwizinto zayo kunye neendlela zayo. Kukho imibutho emininzi efihlakeleyo ngaphakathi kwenkolo nganye nganye. Eminye yale mibutho iyimfihlo igcina amalungu ayo ukuba angazi malunga nobomi, kwaye ayawacaphukisa amalungu awo kwezinye iinkolelo. Imibutho eyimfihlo inokwenza ingozi enkulu ezingqondweni zamalungu abo. Uqeqesho olunjalo olunobandlululo kunye nokungazi kunyanzeliswa lunokuqina, lubeke kwaye lubeke ingqondo yokuba kuya kufuna ubomi obuninzi bentlungu nosizi ukulungisa ubugwenxa obekukhokelele ekwenzeni. Abo baneenkolelo zenkolo yabo malunga nenkolo, banokufumana isibonelelo sokuba lilungu eliyimfihlo yelo dini ukuba izinto kunye neendlela zelo luntu ziyahlangana ngokuvunywa kwaloo ngqondo, kude kusele loo ngqondo ingeyo okanye ifundiswa kwinkolo ethile. Iinkolo zehlabathi zimele izikolo ezahlukileyo apho ezinye iingqondo ziqeqeshelwe okanye zifundiswe khona ukuze zikhule ngokomoya. Xa umntu evakalelwa kukuba inkolo iyayanelisa iminqweno yokomoya, ikuluhlu lobomi bokomoya obumelwa yinkolo. Xa inkolo ingasasiniki ukutya okubizwa ngokuba kukutya kokomoya kwengqondo, okanye xa umntu eqala ukuthandabuza "iinyani" zenkolo yakhe, oko kungumqondiso wokuba akasayiyo eyakhe okanye uyahlulele kuyo . Ukuba umntu uthandabuza, ukuba akonelisekanga kwaye ugxeka iimfundiso zenkolo yakhe ngaphandle kwezinye izizathu ngaphandle kokungoneliseki kunye nokungoneliseki ngokungakhathali, oku kungumqondiso wokuba ingqondo yakhe ivaliwe ukukhanya kokomoya kunye nokukhula kwaye iwela ngaphantsi kweklasi yakhe ubomi bokomoya. Kwelinye icala, ukuba ingqondo ivakalelwa kukuba inkolo yakhe okanye inkolo awayezelwe kuyo imxinwa kwaye imxinwa kwaye ukuba ayonelisi okanye iphendula imibuzo yobomi ingqondo yakhe enqwenela ukuyazi, lo ngumqondiso wokuba Ingqondo ayiveli kwaye ikhula ngaphandle kolo klasi lumelwe yinkolo ethile kwaye ibonisa ukuba ingqondo yakhe ifuna into eza kubonelela ngokutya kwengqondo okanye kokomoya okukufunayo ukukhula okuqhubekayo.
Imibutho eyimfihlo yeklasi yesibini yenziwa yile mibutho eneempawu zokufumana ubupolitika, ezentlalo, ezemali kunye nezibonelelo zenkululeko. Phantsi kweli klasi kuza imibutho yoluntu kunye neyabantu abantliziyo zilungileyo, abo bacwangciswe ngokufihlakeleyo ukubhukuqa urhulumente, okanye abo bazibhangayo kunye ngeenjongo zokuzithethelela okanye ukubulala. Umntu unokuxela ngokulula ukuba ngaba ezinye zezi ziya kumnceda okanye zikubuyele ukukhula kwengqondo yakhe ukuba uyazi iinjongo kunye nezinto zayo.
Umbono wemfihlo kukwazi okanye ukufumana into abanye abangenayo, okanye ekwabelaneni ngolwazi nabambalwa. Umnqweno wolwazi lomelele kwaye unomdla kwizinto ezingaphuhliswanga, ubutsha kunye nengqondo ekhulayo. Oku kuboniswa ngumnqweno wokuba abantu babe yinto yento ekhethekileyo kwaye ekunzima ukuyingena neya kuthi incume ekuncomeni okanye enomona okanye yoyike abo bangengabo. Nabantwana bayathanda ukuba neemfihlo. Intombazana encinci iyambatha iribhoni ezinweleni okanye esinqeni sayo ukubonisa ukuba inemfihlo. Uyinto yomona kunye nokunconywa kwawo onke amanye amantombazana amancinci kude kube yimfihlo yaziwa, ke iribhoni kunye nemfihlo ilahlekelwe lixabiso. Ke enye intombazana encinci enenye iribhoni kwaye imfihlo entsha iziko lokutsala. Ngaphandle kwezopolitiko, ezemali kunye nebutho elikhohlakeleyo okanye elinolwaphulo-mthetho, uninzi lweemfihlo zemibutho efihlakeleyo yehlabathi, azibalulekanga kangako okanye zibaluleke kangako njengemfihlakalo yentombazana encinci. Ukanti abo bangabo banikezwe “ukudlala,” okuluncedo kubo njengemfihlo yentombazana kuye. Njengoko ingqondo ikhula ayisafuni mfihlakalo; Ifumanisa ukuba abo banqwenela ukuba yimfihlo, ukuba abadala, okanye ukuba iingcinga nezenzo zabo bafuna ubumnyama ukuthintela ukukhanya. Ingqondo ekhulayo inqwenela ukusasaza ulwazi, nangona isazi ukuba ulwazi alunokunikwa bonke. Njengoko umdyarho uhambela phambili kulwazi, imfuno yemibutho eyimfihlo yokuphuhliswa kwengqondo kufuneka inciphe. Imibutho eyimfihlo ayimfuneko ekuqhubeleni phambili kwengqondo ngaphaya kweminyaka yamantombazana esikolo. Ukusuka kwezamashishini nakwezentlalo nakwezoncwadi, ubomi obuqhelekileyo bunazo zonke iimfihlakalo eziyimfuneko ukuze ingqondo izisombulule kwaye ingqondo iya kuthi iphuculwe ngokwamanqanaba obutsha. Akukho luntu lufihlakeleyo olunokuqhubela phambili ingqondo ngaphaya kokukhula kwendalo okanye lwenze ukuba lubone iimfihlakalo zendalo kunye nokusombulula iingxaki zobomi. Imibutho embalwa eyimfihlo kwihlabathi inokuzuzisa ingqondo ukuba ingqondo ayizukuma kumphezulu, kodwa inokungena ngentsingiselo yokwenyani yeemfundiso zabo. Umbutho onjalo ngumyalelo weMasonic. Xa kuthelekiswa ezimbalwa iingqondo zalo mbutho zifumana ezinye ngaphandle kweshishini okanye izibonelelo zentlalo. Eyona nto ixabisekileyo yokomfuziselo kunye nemfundiso yokuziphatha neyokomoya ziphantse zaphulukana nabo.
Umbutho oyimfihlo ngokwenene onenzuzo kwingqondo ekukhuleni kwawo awaziwa njengebutho elifihlakeleyo, okanye elingaziwayo kwihlabathi. Imele ibe lula kwaye icace njengobomi bendalo. Ukungena kuluntu olufihlakeleyo ayisiyonto. Kukukhula, ngokuzama kwengqondo. Imele ikhule ibe, ayingenwanga. Akukho mntu unokugcina ingqondo ikhuphe kwintlangano enjalo ukuba ngokuzabalazela ukuba nengqondo iyaqhubeka ikhula. Xa ingqondo ikhula iye kulwazi lobomi loo ngqondo izama ukukhupha ukungazi ngokususa amafu, ukutyhila iimfihlakalo kunye nokuphosa ukukhanya kuzo zonke iingxaki zobomi nasekuncedeni ezinye iingqondo ekuveleni nasekuphuhlisweni kwendalo. Ukuba ngumbutho wabucala emfihlakalweni akuyi kuyinceda nengqondo ukuba ngubani na ofuna ukukhula ibe yeyakhe.
Ngaba kunokwenzeka ukuba ufumane into ngeze? Kutheni abantu bezama ukufumana into ngeze? Kwenzeka njani ukuba abantu ababonakala befumana into engento, behlawule ngento abayifumanayo?
Wonke umntu ngokwemvelo uziva ngathi akukho mntu unokufumana into engenanto kwaye isindululo asilungile kwaye inzame ayifanelekanga; okwangoku, xa ecinga ngayo ngokunxulumene nento ethile yakhe Umnqweno, ukugweba okuhle akuhoywa kwaye ngeendlebe ezizimiseleyo uphulaphula eso siphakamiso kwaye azenze akholelwe ukuba kuyenzeka nokuba he angafumana nto ngeze. Ubomi bufuna ukuba ukubuya nje okanye iakhawunti yenziwe kuyo yonke into efunyenweyo. Le mfuno isekwe kumthetho wesidingo, obonelela ngokujikeleza kobomi, ukugcinwa kweefom kunye nokuguqulwa kwemizimba. Lowo uzama ukufumana nantoni na engayi kuza kuye, aphazamisane nokuhamba kobomi kunye nokusasazwa kweefom ngokomthetho wendalo, aze ke azenzele umqobo emzimbeni wendalo. Uhlawula isohlwayo, oluhlobo kunye nayo yonke imizimba elawulwa ngumthetho ekhutshelwa ngaphandle kwaye wenziwe ukuba abuyisele oko ebekuthathile kungenjalo uyekisiwe okanye wakhutshwa ngokupheleleyo. Ukuba uyakuphikisa oku ngokuphikisa ukuba into ayifumanayo yayiya kuphela kuye, impikiswano yakhe iyasilela kuba ukuba oko ebekufumana kungekho nto, kuyacaca ukuba ngeza kuza kuye ngaphandle komzamo wakhe, umzamo awenzileyo ukuze afumane. Xa izinto zithe zeza komnye ngaphandle kwemizamo ebonakalayo, njengaleyo ibizwa ngokuba yengozi kunye nethuba okanye ngelifa, beza ngenxa kwaye ngokwemvelo ukusebenza ngaphandle komthetho, kwaye ngale ndlela isemthethweni nangokusemthethweni. Kuzo zonke ezinye iimeko, njengokufumana izibonelelo ngokwasemzimbeni nangokwenyama ngokunqwenela kuphela, okanye ngokucinga kuphela, okanye ngokwenza iimfuno ngokwebinzana elaziwa ngokuba ngumthetho wobuninzi okanye umthetho wokuzonwabisa, akunakwenzeka ukufumana into ngaphandle kwento nangona enye ibonakala ngathi ayifumani nto. Esinye sezizathu zokuba abantu bazame ukufumana into ngexabiso, kungenxa yokuba nangona beziva ngathi le ayinakuba yinyani, babona ukuba abanye bayifumene into ebonakala ngathi abayisebenzisi, kwaye ngenxa yokuba ithethwa ngomnye abantu abazenzayo bafumana izinto ngokubanqwenela okanye bazifune kwaye babangale de babe nazo. Esinye isizathu sikukuba ingqondo yomntu ayikhule ngokwaneleyo kwaye inamava ngokwaneleyo okwazi ukuba ayinakufumana nto ngaphandle kokuncama konke, ukonqena okanye ukuzenza ngathi inako. Esinye isizathu kukuba lowo ucinga ukuba angafumana into engento akanyanisekanga ngokwenene. Kubomi beshishini obuqhelekileyo ezona zinto zibi kakhulu ngabo bakholelwa ukuba banokuwukhupha umthetho kwaye bangafumani nto, kodwa oku kungenxa yokuba banenjongo yokwenza abantu bangabinobuqili kunabo babonelela ngemfuno yabo. Ke babonelela ngecebo lokufumana ubutyebi ngokukhawuleza okanye elinye icebo kwaye babambisa abanye ngokunganyaniseki kodwa benamava amancinci kunabo ukuba bangene kuwo. Uninzi lwabo bathatyathwa kwisikimu luhlala luboniswa ngumcwangcisi ukuba uza kubafumana njani na abanye abantu kwaye okucacisa indlela abanokufumana ubutyebi ngokukhawuleza. Ukuba ezi bezinyanisekile ngekhe zingeniswe kwiskimu kodwa, ngokubhenela kwi-avarice kunye nenkanuko kwi-dupes yakhe nangeendlela zakhe zokunganyaniseki, umcebisi ufumana okubonelelwa ngamaxhoba akhe.
Abantu abafumana into kufuneka bahlawulele oko bakufumanayo. Ukuba abantu bafumana izinto ezibonakala ngathi ziphuma emoyeni kwaye ziwele ezingubeni zabo ngenxa yokubizwa komthetho wokuninzi okanye kuvimba wevenkile kawonkewonke okanye kumthetho opulence, okanye yintoni kungenjalo, bafana kufutshane- ababonayo ngaphandle kwendlela abathengisa ngokuthenga ngetyala, bengacingi ixesha lokuhlawula. Njengabo ngaphandle kwezixhobo abathenga ngetyala, ezi zinto zokomoya zesanguine zidla ngokufumana izinto abangazidingiyo; njengaba bathengi abangenangcinga, abafuna 'umthetho wobuninzi' baphupha kunye neentsomi baya kwenza okuninzi ngokufumana-kodwa bazifumanise kufutshane nokubhengezwa xa ixesha lokufika selifikile. Ityala alinakwamkelwa, kodwa umthetho ukhupha ukuhlawulwa kwalo. Umntu ubuza impilo kunye nobutyebi bokwenyama ngokubanga nokufuna oku “kumthetho wokuninzi,” okanye “nakanjani na,” okanye nakuphi na okunye, kwaye othe wafumana into yoko kufunwa endaweni yakhe, endaweni yokuba ayifumane ngokusemthethweni xa kufanelekile, kufuneka ibuyise oko ikufumeneyo kunye nenzala efunelwe ukusetyenziswa.
Omnye unokulungisa ukuphazamiseka kwesifo seengcongconi kwaye ubuyisele umzimba empilweni ngesimo sengqondo; kodwa kuya kufumaniseka ukuba ukuphazamiseka kwengqondo kwiimeko ezininzi kuziswa kwaye kuqhubeke ngengqondo ekhathazekileyo. Xa isimo sengqondo esifanelekileyo sithathwa yingqondo ingxaki ye-nerali ilungisiwe kwaye nomzimba uqalise ukusebenza ngokwemvelo. Olu lunyango olusemthethweni, okanye kunoko lususa unobangela wokugula, kuba unyango luyenziwa ngokunyanga ingxaki kumthombo wayo. Kodwa ayizizo zonke izifo kunye nempilo enkenenkene ngenxa yengqondo ekhathazekileyo. Impilo enkenenkene nezifo zihlala ziziswa kukutya ukutya okungalunganga kunye nokwanelisa ukutya okungafunekiyo kunye neminqweno engekho mthethweni. Iimeko zomzimba kunye nezinto onazo zibonelelwa ngokubona ukuba ziyimfuneko kwimisebenzi yomntu, kwaye ke ukuzisebenzela ngokwendlela evumelekileyo ngokwasemzimbeni.
Kuyenzeka ukuba zibangele izifo eziziswe kukutya okungafanelekanga ukuba zinyamalale, kwaye kunokwenzeka ukuba ufumane imali kunye nezinye izibonelelo ezisemzimbeni ngokubanga kwaye ufune ezi naliphi na ibinzana ingqondo onomdla kuyo ukuyila okanye ukwamkela. Oku kunokwenzeka ngenxa yokuba ingqondo inamandla okwenza ezinye iingqondo kwaye ibangele ukuba bazise iimeko abazinqwenelayo kwaye ngenxa yokuba ingqondo inamandla kwaye inokuthi ikwazi ukwenza into ngombandela wenqwelomoya yayo, kwaye lo mba ku ukujika kungenza okanye ukuzisa iimeko ezifunwa yingqondo; inokwenzeka kuba ingqondo inokuwasebenzisa amandla ayo emzimbeni kwaye ibangele ukuba isifo somzimba sinyamalale kangangexesha elithile. Kodwa kuyo yonke imeko apho ingqondo iphikisana nomthetho wendalo ukuzisa iziphumo ezibonakalayo umthetho unyanzelisa ukulungiswa kwakhona, kwaye impendulo idla ngokuba mandundu ngakumbi kunengxaki yoqobo. Ke xa impilo ibangwa kwaye xa iimfuno zempilo yomzimba zinganikezelwanga, ingqondo inokunyanzela ukunyamalala kokukhula okungenampilo, njenge-tumor Kodwa ngenxa yolo hlobo lokunyanga olubonakalayo lubonwa ngokwemvelo ngokuzama ukunqanda ukuqinisekiswa ngokuthe ngqo kuye imithetho. Ngokunyanzela ukuhanjiswa kwesisundu umbandela wesisu kunokuba-njengaxa abantu abakho semthethweni benyanzelwa ukuba bashiye izithuba zabo ngabaguquleli abangalunganga nabangengobudenge-beqhutywa ukuba baye kufuna enye indawo yoluntu, apho iya kwenzakalisa ngakumbi kwaye Kunzima ngakumbi ukufumana nokunyanga. Xa usasazeka ngokunyanzelwa kwengqondo ithumba linokunyamalala kwelinye ilungu lomzimba lisisundu kwaye siphinde sivele kwelinye ilungu lomzimba njengelonda eliqaqambayo okanye umhlaza.
Xa umntu enyanzelisa kwaye enikwa izinto ezibonakalayo ngokuthi azifune “ngokupheleleyo” okanye “kuvimba weyona nto iphezulu,” uya kuziyolisa kangangexesha elithile njengoko umngcakazi ezonwabisa. Kodwa umthetho unyanzelisa ukuba angabuyiseli kuphela oko angakufumananga ngokunyaniseka, kodwa uya kuthi ahlawule ngokusebenzisa oko wayenako. Le ntlawulo ifunwa xa umenzi-sicelo sele eyisebenzisile into ayifunayo-kwaye elahlekileyo xa sele efikelele kuye; okanye intlawulo inokwenziwa emva kokuba efumene izinto ezithile kwaye ilahlekile ngendlela engalindelekanga; okanye unokuthi azithabathele kuye xa ezona uqinisekile ngazo. Ubume bufuna intlawulo kwingqekembe okanye ukulingana kwetyala elityunjiweyo.
Xa ingqondo izama ukuzenza ikhoboka lomzimba ngeendlela ezingekho mthethweni, kwaye ihenyuza amagunya ayo ukusuka kwindiza yayo iye emzimbeni, imithetho yehlabathi yengqondo ifuna ukuba loo ngqondo ihluthwe amandla. Ke ingqondo iphulukana namandla ayo kwaye enye okanye emininzi yamandla ayo ayabekwa. Intlawulo efunwa ngumthetho yenziwa xa ingqondo ithwaxwa kukuhlutha amandla, ukubandezeleka nengxaki eye yabangela abanye ukuba bafumane izinto zeminqweno yabo, kwaye xa sele bezabalazile ngobumnyama bengqondo obukuyo, Imizamo yokulungisa iimpazamo zayo kwaye iphinde izibuyisele ngokwengqondo njengendiza yayo. Uninzi lwabantu ababonakala ngathi bafumana into ngexabiso, akufuneki balinde ukuba bubobunye ubomi kunyanzelekile bahlawule. Intlawulo idla ngokubizwa kwaye ichazwe kubomi babo bangoku. Oku kuyakufunyanwa kuyinyani ukuba umntu uza kujonga imbali yabantu abazame ukufumana into ngelahleko kunye nabonakale ngathi bayaphumelela. Bazizaphuli-mthetho ezigula ngengqondo ezithi ziboshwe zisele zentolongo yesakhiwo sayo.